ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရမည်ဆိုလျှင် တစ်နှစ်အတွင်း သိသာသည့် ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်လာမည်ဟု န? - Yangon Media Group
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရမည်ဆိုလျှင် တစ်နှစ်အတွင်း သိသာသည့် ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်လာမည်ဟု န?
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရမည်ဆိုလျှင် တစ်နှစ်အတွင်းသိသာသည့် ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်လာမည်ဟု နိုင်ငံ တော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁ဝရက်က မြစ်ကြီး နားမြို့၊ မနောကွင်းအတွင်း ပြုလုပ်သည့်ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အခမ်း အနားအဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာတွင် ၎င်းကအထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ကျွန်မတို့နိုင်ငံသာ အေးချမ်း သာယာသွားမယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံအတွင်းမှာသာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရမယ်ဆိုရင် သမ္မတကြီးမိန့်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ၁ဝနှစ်အတွင်းတောင်မ ဟုတ်ဘူး၊ တစ်နှစ်အတွင်းတောင် သိသိသာသာ အပြောင်းအလဲတွေ ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ တကယ့်ကို ပြည်တွင်း စစ်မီးတွေ အားလုံးငြိမ်းသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ အပြောင်း အလဲတွေကို သိသိသာသာမြင်ရလိမ့်မယ်”ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
‘ငြိမ်းချမ်းရေး တွဲလက်များ မြစ်ဧရာမှထပ်ဆင့်ပွား’ခရီးစဉ်ကို ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် န??
ကက်(ရှ်)မီးယားဒေသတွင် ပါကစ္စတန် အမြောက်ကြီးများဖြင့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်